Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Tansaaniya » Dalxiisayaasha Israa’iil ayaa soo degay Tansaaniya iyagoo wata wax ka badan
Jebinta Wararka Caalamka • Warshadaha Warshadaha • Israa’iil Wararka Jebinaya • News • Dib-u-dhiska • Wararka Tansaaniya • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
Dalxiisayaasha Israa’iil ayaa soo dega Tanzania
Waxaa jiray 150 dalxiisayaal Israa’iil ah oo toddobaadkan yimid Tansaaniya si ay u helaan safari duurjoog ah. Kooxdu waxay ka kooban tahay 15 wakiil oo socdaal iyo sawir qaadayaal dalxiis oo ka socda dhulka barakaysan ee Masiixiga ee Israa'iil.
Daneeyayaasha dalxiiska ee Tansaaniya ayaa kooxdan dalxiisayaasha ah u eegaya inay tahay meel looga soo wada jeesto sidii warshadaha loogu soo celin lahaa waddada tan iyo masiibada.
Dalxiisayaasha Israa’iil waxay doorbidaan inay booqdaan jardiinooyinka duurjoogta inta ay fasaxa ku jiraan, iyagoo istaagaya Ngorongoro, Tarangire, Serengeti, iyo Mt. Kilimanjaro.
Tansaaniya waxay ku rajo weyn tahay inay tani calaamad u tahay furitaanka dalxiiska ee Afrika waxayna raadineysaa suuqyo kale oo muhiim ah si ay ugu daydaan, sida Yurub iyo Mareykanka.
Dalxiisayaasha ayaa qeyb ka ah ku dhawaad ​​1,000 dalxiisayaal ah oo ka yimid Israa’iil kuwaas oo la filayo in ay booqdaan Tansaaniya bishan. Tansaaniya waxay ka mid ahayd waddamada Afrika ee soo jiita dalxiisayaasha Israa’iil oo inta badan doorbida dalxiiska jardiinooyinka duurjoogta iyo jasiiradda Zanzibar ee Badweynta Hindiya.
Muddo dhawr sano gudahood ah, Israa’iil waxay ku toogatay booska lixaad ee suuqyada ilaha dalxiiska ee ugu horreeya Tansaaniya ka hor dillaaca adduunka Cudurka caalamiga ah covid-19.
Mr. Shlomo Carmel, oo ah madaxa fulinta iyo aasaasaha Shirkadda kale ee Dalxiiska Adduunka ee Israel, ayaa sheegay in shirkaddiisu ay diyaarin doonto duulimaadyada dalxiisayaasha Israel booqo Tansaaniya sanadkasta. Tansaaniya waxay ka mid tahay meelaha Afrika ee ay shirkaddu u suuqgeynaysay inay soo jiidato dalxiisayaasha ka yimaada Israel, Yurub, Ameerika, iyo suuqyada kale ee dalxiiska ee adduunka oo dhan.
Raiisel wasaarihii hore ee Israa’iil, Ehud Barak, ayaa booqday Tansaaniya dhawr sano ka hor, isagoo calaamad u ah in albaabada dalxiiska loo furayo dadka kale ee Israa’iil fasaxa u ah si ay u booqdaan meeshan safarka Afrikaanka ah.